नेपालले जितेपछि ‘म्याच फिक्सिङ’ पत्ता लगाउने एसएसपीले भने- ‘खुसी छु, मेरो मिसन सफल भयो’ - Enepalese.com
नेपालले जितेपछि ‘म्याच फिक्सिङ’ पत्ता लगाउने एसएसपीले भने- ‘खुसी छु, मेरो मिसन सफल भयो’
इनेप्लिज २०७२ माघ ८ गते २१:४९ मा प्रकाशित
काठमाडौं, ८ माघ । नेपालले २३ वर्षपछि शुक्रबार अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ । उपाधि जितेपछि सबैले खुसी मनाएका छन् । तर, यति लामो समयपछि नेपाली टिमले कसरी जित्यो ? २३ वर्षको अवधिमा नेपालले किन जितेन भन्ने प्रश्न पनि चासो विषय बनेको छ । यसका विभिन्न कारण छन् जसमध्ये मुख्य कारण भनेको म्याच फिक्सिङ (खेल मिलेमतो) ठानिएको छ ।
नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका खेलाडीहरुलाई पर्याप्त प्रशिक्षण र सुविधा दिइएकै थियो । तर, २३ वर्षसम्म कुनै म्याचमा पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन भएन् । न त ठूला उपाधि जित्न सके । यसको कारण पत्ता लगाउने पहिलो व्यक्ति बने प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सर्वेन्द्र खनाल र उनको टिम । खनाल महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा प्रमुख हुन् । उसो त आजकल जहाँ म्याच फिक्सिङको चर्चा हुन्छ त्यहाँ सर्वेन्द्र खनालको पनि चर्चा हुन्छ ।
सिंगो प्रहरी संगठनले गर्न नसकेको अप्रेशन सफल पार्ने अफिसरमा पनि सर्वेन्द्रकै नाम पहिलो स्थानमा आउँछ । उनै सर्वेन्द्रले पत्ता लगाएको म्याच फिक्सिङ प्रकरणलाई आजको खेलले थप प्रमाणित गरिदिएको छ । आफूले हात हालेको कुनै पनि मुद्दा टुंगो लगाएरै छाड्ने खनाल आज नेपाली खेलाडीले गरेको प्रदर्शनबाट निकै खुसी छन् ।
फुटबल भनेपछि हुरुक्कै हुने खनाल पूर्वफुटबल खेलाडी पनि हुन् । उनले दैनिक नेपालसँग भने– ‘म फुटबलको बच्चैदेखिको फ्यान हुँ । आज नेपाली खेलाडीको प्रदर्शनले मेरो मिसन सफल भएको छ । म्याच फिक्सिङ भएको कुरालाई थप प्रमाणित गरिदिएको छ ।’ अब नेपालले कुनै दिन ‘विश्वकप’ खेल्छ : सर्वेन्द्र खनाल म बच्चैदेखि फुटबलको फ्यान हुँ । पहिले पहिले एशियामा नेपाल भन्नै वित्तिकै फुटबलको देश भनेर चिनिन्थ्यो । हामी सबै नेपालीलाई फुटबलले एकत्रित बनाउँथ्यो । तर, पछिल्लो समय परिणाम असाध्यै कमजोर बन्यो । एक होइन् दुई होइन् सयौं खेलमा नेपाल लगातार असफल भयो । म आफै पनि फुटबलप्रेमी भएको नाताले पहिल्यैदेखि चिन्ता थियो तर, जब मैले जिम्मेवारी पाएँ, तब सोधखोज गर्दै गएँ । २३ वर्षसम्म नेपालको फुटबलको स्तर कसरी खस्कियो ? किन विग्रियो ? भन्ने कुरामा फोकस भएँ । सम्बन्धित पक्षसँग कुरा गरेँ । एकपछि अर्काे कारण खुल्दै गयो ।
अनुसन्धान गर्दै जाँदा फिक्सिङ हुने गरेको यथेष्ठ प्रमाण भेटिए । त्यसपछि फिक्सिङमा संलग्न खेलाडीलाई पक्रेर अनुसन्धान गर्यौ । अनुसन्धानपछि प्रमाणित भयो कि नेपाली फुटबल पछाडि पर्नको कारण त म्याच फिक्सिङ रहेछ । यो घटनालाई आजको परिणामले पनि पुष्टि गरिदिएको छ । इमान्दारीपूर्वक खेलेको परिणाम अस्ति माल्दिभ्स र आज बहराइनसँग खेल्दा देखियो । अहिले नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले जुन परिणाम देखायो, त्यो देखि म निकै खुसी छु । मेरो म्याच फिक्सिङ मिसन पूरै सफल भएको छ । आजको जित खेलाडीले सही भावना, इमान्दारीकापूर्वक खेल्नुको परिणाम हो । जुनसुकै अन्तर्राष्ट्रिय खेल पनि देशको राष्ट्रियतासँग जोडिएको हुन्छ । आजको जितले राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई थप उचो बनाएको छ । खेलाडीको राम्रो प्रदर्शनले नै राष्ट्रियताको भावना बढाउँछ ।
अब नेपाली फुटबल यसै रफ्तारमा अगाडि बढ्छ र एकदिन विश्वकपकै उपाधि जित्न भन्ने मलाई विश्वास छ । नेपालका खेलाडीमा सम्भावना छ, प्रतिभा छ । यिनै कारणले गर्दा आज परिणाम देखिएको हो । आजको जित सम्पूर्ण नेपालीहरुको जित हो । खेलको नाममा बदमासी गर्ने बदमासलाई कठघरामा ल्याउनुपर्छ । नेपालको झण्डा बेच्ने, नेपालीको भावनामा ठेस ल्याउने, राष्ट्रियता सौदा गर्नेलाई कदापी छोड्नुहुन्न् । अब हामी फुटबल प्रेमीले नेपाली फुटबललाई माथि पुर्याउन खेलाडीहरुलाई हौसला दिनुपर्छ र भविष्यमा विश्वमै खेल्ने सक्ने बनाउनुपर्छ ।
दैनीक नेपाल बाट